Worms: dzimwe nzira dzekutamba ne "honye" muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Worms: dzimwe nzira dzekutamba ne "honye" muLinux
Kana iwe wakasungwa neakakurumbira ehondo honye, ​​saka zvirokwazvo iwe uchave uchida kuziva mamwe dzimwe nzira dzehonye pane linux. Uye ndeyekuti uyu mutambo wengano wevhidhiyo wakwanisa kutora vazhinji, kunyangwe iri nyore ichiri muropa, kunyanya painotambwa mumitambo yakawanda kurwisa vamwe kana nemuchina.
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva ndechekuti kune zviri pamutemo Worms mazita anowanikwawo kuLinux. Naizvozvo, kana iwe wanga usingazive, haufanire kushandisa WINE kana chaiwo michina kana chero chinhu chakadai kuzvirapa uye tamba uyu mutambo wevhidhiyo. Ivo vanowanikwa natively, kunyangwe izvi zvisiri izvo mune ese edhisheni ...
ari Worms mazita iwe aunowana muchitoro chiutsi kubva kuValve zvakare yeLinux, ndeiyi:
Worms WMD: Iri zita re2016 rinowanikwa kuLinux ye € 29,99, kunyange hazvo mamwe mapakeji emukati asiri kuwanikwa.
Worms Reload: Iyo ndeyakare kuburitswa, kubva muna 2010, uye zvakare inowanikwa kune Linux ye € 19,99.
Makonye Makondo Hondo: Iyo ndeimwe yemapakati kuburitswa pakati peiri yapfuura, yakatangwa muna 2013. Inowanikwa ne € 29,99.
Asi kana iwe ukatarisa chimwe chinhu chakasiyana nemavambo uye izvo zvakare zvinotevera simba rimwe chetero, iwe unofanirwa kuziva:
ShellShock Rarama: zita iri rakachipa kwazvo, kune € 6,99. Mariri uchafanirwa kupwanya vamwe nezvombo zvakasiyana siyana zvaunogona uye nenzira yakafanana kune simba reWorms, asi mune iyi matangi panzvimbo yehonye ...
Musoro wemusoro- Iyo Worms-dhizaini-inotendeuka-kurwa vhidhiyo mutambo, asi iine pink hedgehogs panzvimbo yehonye. Uye zvakare, yakasununguka zvachose.
OpenLieroX: izita rakafanana neWorms naLiero, asi yakavhurwa sosi uye yemahara. Naizvozvo, iwe unogona kunakirwa nechimwe chinhu chakafanana neWorms usingashandisi imwe euro pane yako yaunofarira distro nekuda kweichi chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Worms: dzimwe nzira dzekutamba ne "honye" muLinux
Networks inosangana uye iyo meseji yakachinja nhoroondo
Makirabhu evashandisi. Imwezve nhanho munzira yekuLinux